Ajaja Abiyyiin Hospitaalota Mootummaa irratti gatiin dhukkubsatootni ittiin yaalaman akka dabalu ajajame . – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsAjaja Abiyyiin Hospitaalota Mootummaa irratti gatiin dhukkubsatootni ittiin yaalaman akka dabalu ajajame .
Ajaja Abiyyiin Hospitaalota Mootummaa irratti gatiin dhukkubsatootni ittiin yaalaman akka dabalu ajajame .
Qaala’insa Jireenyaa Itiyoophiyaa mudatee jiruuf diinagdeen biyyittii kufaa jiraachuun rakkoon hawaasaa Dabalaa jiraachuu SQ odeeffateera.
Rakkoo Impaayera Itiyoophiyaa keessatti uumamee jiruuf biyyootni Addunyaa fi dhaabbatootni gargaarsaa Baankii Addunyaa dabalatee gargaarsa Itiyoophiyaaf godhan guutummaa guutuutti irraa kutuun ni yaadatama.
Erga gargaarsi karaalee adda addaa itiyoophiyaa irraa citee baankileen biyyittii
Hunduu kisaaraa keessa galuu irraa kan ka’e namni dhuunfaa kamuu baankii irraa guyyaatti Qr 50,000 ol akka baafachuu hin dandeenyee fi torbanitti immoo nama shaniif qofa erguun akka dandahamu murteessanii jiru.
Murtoon kun qisaasama diinagdee amma biyyittii mudateef furmaata tahuu mala jedhanii kaayyatanis yeroo ammaa kana baankiileen hedduun Qarshii dhabuun irraa kan ka’e systema baankii balleessanii systemni hin jiru jechuun maamiltoota rakkisaa akka jiranis beekamaadha.
Qisaasama diinagdee amma Itiyoophiyaa mudatee jiruuf ajaja isaan mallattoon isaanii kan irra jiru hospitaalota gurguddaa kanneen kan akka hospitaala Minilik fi hospitaala Phaawuloosiitti gatiin tajaajilamtootni kaffalan dachaan akka dabalu tahee jiraachuu maddeen keenya SQtti himaniiru.
Akka SQ maddeen hospitaalota gurguddoo tahan irraa qulqulleeffachuu yaaletti kan Amman dura hanga qarshii 100n bitamu yeroo ammaa hanga Qr 300 ol kan tahee jiruu fi ammaan dura hospitaalota kanneen akka Phaawuloos keessatti namni dhukkubsatee ciise gatii siree qarshii 400 kan ture yeroo ammaa kana qarshii 600 tahuun haadholii dahumsaaf wal’aansa barbaacha gara hospitaala a deeman dabalatee gatiin dhukkubsattootni itti yaalaman ajaja MM itiyoophiyaa Abiyyiin mallatteeffameen akka daballiin godhamu taasifamuu Qorannoo Qaruuxeen Qeerroo Bilisummaa Oromoo hospitaalota dhukkubsattootni itti yaalamaa jiran gaafachuun akkasumas Doktoroota hospitaalota kana keessatti gahee qaban gaafachuun mirkaneeffatee jira.
Akka Doktoroonni hospitaalotaa kunneen jedhanitti nuyi hin beeknu akka gatiin dabalataa godhamu kan ajaje MM Abiyyidha malee hospitaala miti mallattoo isaan xalayaan hospitaalotaaf ergame hojiirra akka oolu kan jedhudha jechuun yaada isaanii SQtti himaniiru.
Yeroo ammaa diinagdeen itiyoophiyaa kufee kan jiruu fi tajaajilli hawaasni argachuu qabus haala hin beekamneen ajaja Abiyyiin Dabalaa kan jiru yoo tahu barameera.
Itiyoophiyaa keessatti kufaatii diinagdeen wal qabatee hawaasni beelaaf saaxilamaa yeroo jirutti kaabinee fi kaadireen namoota basaastu qarshii hawaasaa saamuun akka malee mancaasaa jiraachuus Qaruuxeen Qeerroo Bilisummaa Oromoo mirkaneeffateera.
Uurjii oromoo page